ဗစ်တိုးရီးယား Alonso သည် ၂၀၁၈ ချားလ်စ်အက်စ်ဆွပ်ဇ်ဆုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် NAB သတင်းများ | 2018 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဗစ်တိုးရီးယား Alonso 2018 ချားလ်စ်အက်စ် Swartz ကိုဆုချီးမြှင့်လက်ခံမှ
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA) ဗစ်တိုးရီးယား Alonso, လေးစားထုတ်လုပ်သူများနှင့်အမှုဆောင်ဒုသမ္မတ, အံ့ဩခြင်းစတူဒီယိုများအတွက်ထုတ်လုပ်မှု, နိုဝင်ဘာလ 2018 အပေါ် HPA ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားတွင်အဖှဲ့အစညျး၏ 15 ချားလ်စ်အက်စ် Swartz ကိုဆုချီးမြှင့်ခံရကြလတံ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာအကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖန်တီးမှု artistry, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ချားလ်စ်အက်စ် Swartz ကိုဆုချီးမြှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကွဲပြားခြားနားရှုထောင့်ကိုဖြတ်ပြီးလက်ခံသူရဲ့အသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရိုသေ။ အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲအတွက် Skirball ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၌၏အကြောင်းပါလိမ့်မည် Los Angeles မြို့ကယ်လီဖိုးနီးယား။
Buenos Aires, Alonso ၏တစ်ဦးကဇာတိ 19 ၏အသက်အရွယ်မှာသူမ၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ဦး PA ဆိုပြီးအဖြစ်စတင်ထို့နောက် VFX အင်အားကြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုမိန်းမှာလေးနှစ်အလုပ်လုပ်, စက်မှုလုပ်ငန်းမှတဆင့်တက်သူမ၏လမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် Ridley Scott ရဲ့အပါအဝင်ရုပ်ရှင်၏နံပါတ်ပေါ် VFX ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ကောင်းကင်ဘုံ၏ဒမ်း, Tim Burton ရဲ့ Big Fish ငါး, အန္ဒြေ Adamson ရဲ့ Shrek နှင့်အံ့ဩခြင်းမယ့် သံမဏိလူသား။ သူမသည်အဘို့အထူးချွန်ထောက်ပံ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု / ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများအတွက် Visual Effects Society က (VES) ဆုကို ကောင်းကင်ဘုံ၏ဒမ်းနှစ်ခုအပိုဆောင်းက Shared အမည်စာရင်းနှင့်အတူ (အကောင်းဆုံးတစ်ခုတည်းအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုထူးချွန်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု / ဆိုးကျိုးများမောင်းနှင်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံ) ကို သံမဏိလူသား။ နောက်ဆုံးတော့သူမအပေါ် Co-ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်နှစ်ဆ, ကုမ္ပဏီရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်အံ့ဩခြင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး သံမဏိလူသားသူမအပေါ် reprized တစ်အခန်းကဏ္ဍ Iron Man 2, Thor နှင့် Captain America: The First Avenger။ 2011 မှာတော့သူမဟာ Blockbuster hit အပေါ်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူမှ advanced လက်စားချေသူများ နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အံ့ဩခြင်းရဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးကတည်းက Iron Man 3, Captain America: အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier နှင့် Captain America: ပြည်တွင်းစစ်ကြီး, Thor: The Dark ကမ္ဘာ့ဖလား, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, ပုရွက်ဆိတ်-Man, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, ဆရာဝန်ထူးဆန်းသည်က Galaxy Vol ၏ Guardians ။ 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok, Black က Panther, Avengers: Infinity စစ်ပွဲနှင့်မကြာသေးမီက, ပုရွက်ဆိတ်-Man နှင့် WASP။ သူမ၏လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍများတွင်သူမ EVP, အံ့ဩခြင်းစတူဒီယိုများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်အရေးကြီးသောဇာတ်ကားအရေအတွက်အပေါ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အမှုဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
Alonso အတွက်အရေးပါသောအသံဖြင့်ဖွစျနပွေီ ဟောလိဝုဒ် တစ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်တစ်ဦး Latina အဖြစ်နှင့်အမျိုးသမီးအကြီးတန်းအမှုဆောင်အဖြစ်။ သူမသည်တစ်ဦးအဖြစ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည် ဟောလိဝုဒ် Entertainment ကပါဝါ 2017 အတွက်သတင်းထောက်ရဲ့ 100 အမျိုးသမီးများနှင့်ထူးချွန် Vision ၏နှင့်ရုပ်ရှင် & ရုပ်မြင်သံကြားအတွက် New York ကအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အောင်မြင်မှုများအတွက်မူဆယ် Award ဆုများအတွက် 2015 honoree ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ဦးမှပေးသောသောကိုလည်းအဆင့်မြင့် Imaging ကလူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် Harold လွိုက် Award ဆုနှင့်အတူတင်ပြခံရဖို့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ အဘယ်သူသည်အလုပ်၏ခန္ဓာကိုယ် created နှင့်အဆိုကိုရုပ်ပုံအနုပညာပုံစံချီတက်ကြောင်း 3-D ကိုအတွက်တိကျတဲ့အောင်မြင်မှုများသိရသည်။ 2017 မှာတော့သူမဟာ 15 မှာအမြော်အမြင် Award ဆုနှင့်အတူဂုဏ်ပြုခံရဖို့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်th အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုမှတဆင့်မမေ့နိုင်သောဇာတ်လမ်းပြောပြ၏သူမ၏တိုးဘို့နှစ်ပတ်လည် VES ဆုပေးပွဲ။ သူမသည်ပေါ်တွင်အလုပ်မှာလောလောဆယ်တွင် ၏ခေါင်းစဉ်တပ်မထားပါစတုတ္ထအရစ်ကျ "Avengers" နှင့် "ဗိုလ်ကြီးအံ့ဩခြင်း။ "
အဆိုပါချားလ်စ်အက်စ် Swartz ကိုဆုချီးမြှင့်ထားတဲ့, ဆန်းသစ်ဖှယျနှင့်သနားကြင်နာတတ်တဲ့အလုပ်အမှုဆောင်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိ HPA များအတွက်အထူးအဓိပ်ပာယျနဲ့တန်ဖိုးကြီးဂုဏ်အသရေဖြစ်၏။ ချားလ်စ် Swartz ကိုနောက်ဆုံးမှာတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Entertainment ကနည်းပညာစင်တာ (ဦးဆောင်ဝေးသောအထိဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခဲ့[အီးမေးလျ protected]), တစ်ဦးဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်း thinktank နှင့်သုတေသနစင်တာ။ အဆိုပါချားလ်စ်အက်စ် Swartz ကိုဆုချီးမြှင့်သည့် HPA ဆုပေးပွဲကော်မတီနှင့်ဒါရိုက်တာ၏ HPA ဘုတ်အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ချီးမြှင့်သည်, နှစ်စဉ်ပေးသောမပေးပါ။
ရှေ Hallen သည် HPA ဥက္ကဋ္ဌ, ကျနော်တို့အဘယ်သူ၏အလုပ်နှင့်အောင်မြင်မှုမဆိုစံနှုန်းအားဖြင့်အထင်ကြီးစရာရှိပါတယ်ဗစ်တိုးရီးယား Alonso, ရန်ချားလ်စ်အက်စ် Swartz ကိုဆုချီးမြှင့်တင်ဆက်ဖို့ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ဤသည်ဂုဏ်အသရေစဉ်းစားဟန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်ပေးထားသောနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဆုပေးပွဲကော်မတီတစ်ဦးကိုခံထိုက်သောသူနှင့်ငြင်းလက်ခံရရှိသူလည်းမရှိကြောင်းခံစားရတဲ့အခါမှသာဖြစ်ပါသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းသူမ၏အခွက်တဆယ်, ဇွဲနှင့်ထက်မြက်ပြသခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ယာဉ်မှနှင့်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ချားလ်စ်အက်စ် Swartz ကိုဆုချီးမြှင့်၏ကြွယ်ဝစွာထိုက်သောသူသည်မိန်းမတို့အားအသိအမှတ်ပြုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ "
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲဖန်တီးမှုအမျိုးအစား, အင်ဂျင်နီယာ Excellence နှင့်တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့။ အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲ Foundation မှအသင်းဝင်များ၏ရက်ရက်ရောရောစပွန်ဆာမှတဆင့်တတ်နိုင်သမျှလုပ်နေကြတယ် လွန်စွာလိုလားသော, Dolby, EFILM, Encore နှင့်စတီရီယို: D; ခေါင်းစဉ်ပံ့ပိုးကူညီ Blackmagic ဒီဇိုင်း; နှင့်ပလက်တီနမ်ပံ့ပိုးကူညီ IMAXစပွန်ဆာသို့မဟုတ် program ကိုကြော်ငြာခွင့်အလမ်းများကိုအမှာ Joyce Cataldo ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected]။ လက်မှတ်တွေယခုမှာရရှိနိုင်ပါ www.hpaonline.com.
အဆိုပါ 2017 ဆုရရှိသူများစာရင်းကိုအဘို့, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ.
Pixelogic သည် Whip Media Group မှမဟာဗျူဟာအရထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပါတနာကိုအမည်ပေးခဲ့သည် - မေလ 7, 2020
ဟောလိဝုဒ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းကစက်မှုလုပ်ငန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေး Task Force Forms - မေလ 5, 2020
Hollywood Professional Association သည် Virtual Content Offerings ကိုချဲ့ထွင်သည် - ဧပြီလ 29, 2020
လွန်စွာလိုလားသော ချားလ်စ်အက်စ် Swartz ကိုဆုချီးမြှင့် HPA ဖားအံဆု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော အံ့ဩခြင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ VFX ဗစ်တိုးရီးယား Alonso 2018-07-31
ယခင်: CueScript Management Console IBC 2018 မှာစတင်ရန်မှ
နောက်တစ်ခု: ချပ်မန်း UNIVERSITY upgrade ကို AT ရုပ်ရှင်နဲ့မီဒီယာအနုပညာ Dodge COLLEGE HX ခွား Eclipse TO သို့